Vee24: लाइभ भिडियो सगाई 38% | Martech Zone
यो हप्ता, मसँग सब भन्दा अचम्मको अनुभव थियो VXXUMXवेबको लागि अनलाइन भिडियो समाधान। कम्पनी को एक अविश्वसनीय किफायती छ कि एक सेवा समाधान को रूप मा संयोजन हार्डवेयर र सफ्टवेयर को लागी केहि बर्ष भन्दा बढी भएको छ।
के VXXUMX पूरा गर्नुभयो आश्चर्यको केही छोटो छैन। जब ग्राहकले तपाईंलाई साइन इन गर्दछ, तिनीहरूले सुरुमा हार्डवेयर खरीद गर्दछन्, जसमा एक टावर समावेश छ जसमा भिडियो क्यामेरा, फ्रन्ट लाइटि,, एक प्रसारण मोनिटर र एक एयर-प्रकाश पनि समावेश छ। कम्प्युटर २ 24 ″ टच स्क्रीन मोनिटर हो जुन विन्डोज7र Vee24 अनुप्रयोग चालु हुन्छ।
सफ्टवेयर मात्र पप खोल्न र एक भिडियो सुरू गर्दैन। यसले अर्को छेउमा व्यक्तिसँग च्याट गर्न तपाईंलाई प्रदान गर्ने राम्रो डिव पप अप गर्दछ। पपअप प्रतिनिधिद्वारा स्वचालित रूपमा आरम्भ हुन सक्छ, वा प्रयोगकर्ताले स्क्रिनको छेउमा राम्रो ट्याब क्लिक गर्न यसलाई सुरु गर्न सक्दछ।
यदि प्रयोगकर्ताले आमन्त्रित स्वीकार गर्दछ, सफ्टवेयरले तपाईंलाई प्रतिनिधिसँग जोड्दछ। भिडियो च्याट खोल्ने समानान्तर (तपाईं आफ्नो क्यामेरा पनि खोल्न सक्नुहुनेछ, प्रतिनिधिले तपाईंको ब्राउजरको सबै विवरणहरू (अपरेटि System प्रणाली, ब्राउजर, आदि) र समान आयामहरूको साथ पृष्ठ पनि देख्न सक्दछ। तीनिहरूले उनीहरूको विन्डोलाई बाहिर सार्न पनि सक्छन्। तपाईंलाई अधिकतम ईस्टेट प्रदान गर्ने तरिकाको।
सायद सबैभन्दा अचम्मको विशेषता यो हो कि Vee24 सँग पनि सेयर सुविधा छ - कागजातहरू, पावरपोइन्ट्स वा अन्य कुनै फाईल खोल्न र साझा गर्न अनुमति दिदै। केवल यो मात्र साझा गर्न सक्नुहुन्न ... तपाईं प्रतिनिधिसँग अन्तर्क्रिया गर्न सक्नुहुनेछ। सीईओ एन्डी हेन्शावले अर्को साइटमा छुट्टीको अर्डरको माध्यमबाट मलाई हिंडे ... अनुभव अविश्वसनीय थियो, सजिलो हुन सक्दैन। हामी दुबै एउटै पृष्ठमा फारम परिवर्तन गर्न सक्षम छौं, एकै समयमा र यसलाई बुझाउने!
Vee24 का ग्राहकहरूको नतीजा पहिले नै अचम्मको छ ... फोर्ड, लेक्सस, ल्यान्ड्स एन्ड, मिनी कूपर, Heels.com र सयौं अन्य कम्पनीहरू जस्तै कम्पनीहरूले रूपान्तरण दरहरुमा% 38% लिफ्ट। प्रणालीको ग्राहक प्रतिक्रिया चार्टको साथ बन्द गरिएको छ।
यहाँ इन्टर्नेट वर्ल्ड मा Vee24 को एक भिडियो प्रदर्शन छ:
जबकि धेरै तत्काल परिणामहरू रिटेलको साथ देखिएका छन्, म कल्पना गर्न सक्दिन कि सफ्टवेयरमा लगानीले सेवा कम्पनीको रूपमा सफ्टवेयरमा ग्राहक प्रतिधारणका लागि के गर्न सक्दछ। वास्तवमा एक अर्कालाई हेर्न र स्क्रिन साझा गर्ने क्षमताले ग्राहक सेवालाई अहिलेको दुःस्वप्नको सट्टा सजिलो बनाउँदछ! यस्तो देखिन्छ कि Vee24 यस उद्योगमा केवल अगुवा होइन, तिनीहरू केवल हालका सेवाहरू प्रदान गर्ने कम्पनी हुन्। निस्सन्देह तिनीहरू अत्यन्त सफल हुनेवाला छन्! हामीले तिनीहरूलाई रेफरल संलग्नताका लागि पहिले नै हिर्काइरहेका छौं।
त्यसोभए उनीहरूले यो सूचित गर्न नबिर्सनुहोस् कि तपाईले यस सेवा मार्फत फेला पार्नुभयो Martech Zone!
टैग: जीमेल (एन्ड्रोइड)याहू मेल (डेस्कटप)
जुन 20, 2011 मा 1: 44 PM
Vee24 मा: बढि सहमत हुन सकेन। हामी जर्मन बजारमा मुट्ठीभर ग्राहकहरूको लागि Vee24 सुइट प्रयोग गर्दैछौं र यो अद्भुत छ। तर के टेक्नोलोजी जत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ: यसले हाम्रो ग्राहकहरूलाई व्यापार चलाउन मद्दत गर्दछ। मेरो विचारमा यो इन्टरनेटमा सीसा र वृद्धिशील बिक्री उत्पादन गर्ने सबैभन्दा प्रभावकारी तरिकाहरू मध्ये एक हो!